Mogadishu Journal » Cristiano Ronaldo ayaa sheegay inuusan waligiis isbeddeleynin ka dib markii uu xanaaqay.
Cristiano Ronaldo ayaa sheegay inuusan waligiis isbeddeleynin ka dib markii uu xanaaqay.
Cristiano Ronaldo ayaa faallo ka bixiyay jawaabtii uu siiyay Portugal oo loo diiday inuu ku guuleysto guushii ugu dambeysay ee Belgrade Sabtidii.
Cristiano Ronaldo ayaa sheegay inuusan waligiis isbeddeleynin ka dib markii uu xanaaqay caro ka dib markii kabtanka Portugal loo diiday inuu ku guuleysto xilli danbe oo muran dhaliyay kulankii Serbia.
Ronaldo ayaa lagu qanciyay dadaalkiisii ​​ugu dambeeyay ee uu ka gudbay xariiqda, laakiin saraakiisha ayaa si cad u sheegay in 10-nin oo Serbia ah ay ka soo kaceen labo gool oo ay u dhaliyeen si ay u xaqiijiyaan barbaro 2-2 ah isreebreebka Koobka Adduunka Sabtidii.
Stefan Mitrovic ayaa safka hore iyo gadaal ka cadeeyay si uu u carqaladeeyo Portugal waqtigii dhimashada, in kasta oo Ronaldo laga tagay isagoo murugaysan maaddaama xiddigga sare uu ku adkaysanayo inuu ka gudbay khadka Belgrade, halkaas oo aysan lahayn VAR meel lagu fiiriyo go'aanka.
Ronaldo ayaa jaale loo siiyay mudaaharaadkiisa ka hor inta uusan si caro leh dhulka ugu tuurin calaamada kabtankiisa isla markaana uu garoonka ka baxay iyada oo ilbiriqsiyo kaliya u harsan yihiin.
Intaa ka dib, Ronaldo wuxuu adeegsaday Instagram iyo baraha bulshada si uu ugala hadlo dhacdadii muranka dhalisay ee uu u aaday Serbia kulankii Group A.
Inaan noqdo kabtanka xulka Portugal waa mid ka mid ah hanka iyo mudnaanta noloshayda, ”ayuu qoray Ronaldo. “Had iyo jeer waxbaan siiyaa waxna waan u siinayaa dalkeyga, taasi waligeed isma beddeli doonto.
"Laakiin waxaa jira waqtiyo adag oo wax laga qabanayo, gaar ahaan markaan dareemayno in ummad dhan la ciqaabayo. Madaxaaga kor u qaad oo caqabadda xigta hadda la kulan. Kaalay, Portugal!"
Tababaraha xulka Portugal Fernando Santos ayaa shaaca ka qaaday garsooraha "waji gabax" Danny Makkelie inuu raaligelin ka bixiyay ciyaarta ka dib caasimada Serbia.
“Garsooruhu wuxuu iiga raali galiyey qolka qolka wuxuuna ii sheegay inuu xishooday,” ayuu Santos ku yiri intii lagu jiray shirkiisa jaraa’id. “Waxaan la joogay qolka labiska isaga wuuna i raali galiyay, wuxuu garoonka iigu sheegay inuu arki doono sawirada hadii ay tahayna wuxuu iigu yeerayaa raali galin ... .
Waa markii labaad oo wajiga isreebreebka ah oo ay raaligelin ka bixiyaan ciyaarta ka dib ... Waxaan garoonka ugu sheegay in tijaabada noocaas ah aysan jirin VAR ama xariiqda gooldhalinta ... Dhacdadii, mid ka mid ah waxyaabihii uu ii sheegay ayaa ahayd xariiqda gooldhalintu muhiim ayey ahayd… laakiin waxaan u sheegay in kubaddu ay nus mitir u jirto goolka dhexdiisa, Ma jirin wax caqabad ah oo u dhexeeya goolhayaha iyo xariiqda goolka.
“Waa inaan dib u fakarnaa, garsoorayaashu waa aadanaha oo qaladaad ayey sameeyaan, laakiin taasi waa sababta ay u jirto VAR iyo teknolojiyadda xariiqda gooldhalinta si looga fogaado tan.”
DF oo soo saartay liiska goobaha laga heli karo Talaalka ka hortaga COVID-19